Inona no jerena ao an-tanànan'i Oviedo | Vaovao momba ny dia
Raha vonona ny hanao fialantsasatra kely hafa isika dia azo antoka fa ho tianay izany mankafy amin'ny toerana toa an'i Oviedo, tanàna iray any avaratry Espana. Oviedo dia renivohitr'i Asturias ary miavaka amin'ny zavatra toy ny tanànany taloha. Iray amin'ireo fitsidihana azo tanterahina ao anatin'ny roa andro ireo ary izany no mahatonga azy ireo fialantsasatra mety.
Andao hojerentsika hoe inona ireo toerana tena mahaliana ananantsika any Oviedo. Raha hanao fialan-tsasatra ianao dia tsara kokoa ny mitazona lisitra miaraka amin'izay hitantsika rehetra eto amin'ity tanàna ity mba tsy hahita zavatra isika. Amin'izay isika vao afaka mankafy tanteraka ny toerana tsirairay notsidihina.
1 The Plaza del Fontán
2 Kianja Katedraly Oviedo
3 Kianjan'ny Trascorrales
5 Miantsena amin'ny arabe Uría
6 Ny lalan'ny divay sy ny arabe Gascona
7 Tranombakoky ny zava-kanto sy ny tranombakoka arkeolojia
8 Mizotra mamakivaky ireo sarivongany
9 Tendrombohitra Naranco sy ny Pre-Romanesque
The Plaza del Fontán
Ity dia iray amin'ireo kianja manan-danja indrindra eto an-tanàna. Midika hoe puddle i Fontán ary nomen'izy ireo an'io anarana io izy satria eto dia nisy lagoon kely teo akaikiny ny tsena dia natao tamin'ny Moyen Âge. Taonjato maro taty aoriana dia nanandrana maina izy io nefa ankehitriny dia mbola misy fantsona roa izay ivoahan'ny rano. Ao amin'ity kianja ity no ahitantsika trano taloha tsara tarehy izay toa nalaina tamin'ny vanim-potoana hafa. Misongadina izy ireo amin'ny lavarangana sy ny arcades misy azy ireo. Misy tsena eto koa andro maromaro isan-kerinandro ary eny an-kianja dia ahitantsika ny sasany amin'ireo sarivongana ao an-tanàna, toy ny an'ny mpivarotra. Misy ihany koa bara sasany hijanonana kely ary hanana cider.
Kianja Katedraly Oviedo
Eto amin'ity kianja ity no ahitantsika ny Katedraly Oviedo, toerana fandehanan'ny mpivahiny mankamin'ny Santiago de Compostela. Ny anarany dia ny Santa Iglesia Basilica Catedral Metropolitana de San Salvador de Oviedo. Ao amin'ny efitranony masina no misy ny reliky ny Kristianisma manan-danja indrindra. Ity Chambre Holy ity dia toerana iray manan-tantara ihany koa. Ao amin'ny Plaza de la Catedral no ahitantsika ny iray amin'ireo sarivongana malaza indrindra eto an-tanàna, dia ny an'ny Regenta.
Io no iray amin'ireo efamira tena izy ao an-tanànan'i Oviedo, izay ahitanao ireo tranobe mahazatra kokoa amin'ny endrika maro karazana. Eto amin'ity kianja ity isika dia mahita sarivongana manome anarana faharoa azy, satria izy io dia fantatra ihany koa amin'ny hoe Plaza de la Burra. Izy dia miaraka amin'ny mpanampy ronono, satria io no kianja fivarotana fromazy sy ronono. Ao amin'ity kianja ity dia misy ihany koa ny efitrano fampirantiana izay faritra fivarotana trondro taloha.
Ity valan-javaboary ity dia eo afovoan-tanàna ary voakarakara tsara, manao fitsidihana tena ilaina iray hafa. Afaka mandeha mamaky ny valan-javaboary isika ary mahita ilay dobo kely. Eo akaikiny dia hitantsika ny iray amin'ireo sarivongana izay nanjary malaza indrindra amin'ny fakana sary. Momba izany ny sarivongan'i Mafalda, iza no miandry antsika hipetraka eo amin'ny dabiliny.
Miantsena amin'ny arabe Uría
Raha mamoaka ianao fotoana hiantsenana, tsy isalasalana fa tokony hijanona amin'ny arabe Uría ianao. Io no lalam-by fiantsenana, izay toerana fivarotana mahaliana indrindra. Ity arabe ity dia miainga avy any Parque San Francisco mankany amin'ny gara ary io no toerana mety hampiala-voly anao amin'ny alàlan'ny fiantsenana kely raha izany no tianao.
Ny lalan'ny divay sy ny arabe Gascona
Raha ny tianao atao dia ny lalan'ny divay hiala sasatra amin'ny fitsidihana be dia be dia azonao izany Làlana Manuel Pedregal. Ao no ahitanao ny atmosfera tsara indrindra. Ankoatr'izay, ao an-tanànan'i Oviedo dia mila mamaky ny arabe Gasikona ianao, izay mahazatra ny manana culines de cider. Eto ianao dia hankafy ny iray amin'ireo fomban-drazana tsara indrindra any Asturias ary hahita toerana maro hisakafoanana antoandro na sakafo hariva koa ianao.
Tranombakoky ny zava-kanto sy ny tranombakoka arkeolojia
Manana tranombakoka mahaliana ihany koa ity tanàna ity. Iray amin'izany ny Museum of Fine Arts, izay nohavaozina vao tsy ela akory izay. Ao amin'ny trano nohavaozina eo afovoany manan-tantara, akaikin'ny katedraly no misy azy. Trano iray izay misy kanto ao aminy ary izany no antony ahazoana mankafy ny toerana sy ny ao anatiny. Ny Museum Archaeological amin'ny ampahany dia miorina amin'ny trano fivarotan'i San Vicente. Amin'izany ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tantaran'ny Asturias sy ny Humanity.
Mizotra mamakivaky ireo sarivongany
Raha misy zavatra ao an-tanànan'i Oviedo dia sarivongana izy io, miaraka amina zato mahery miparitaka manerana ny arabeny. Hevitra tsara ny handehanana amin'ny lalana mitady sarivongana, satria maro ny olona ao an-tanàna ary fomba iray tsy hahadino ireo zorony rehetra ireo. Ny sasany amin'ireo malaza indrindra dia ireo an'ny Mafalda, Woody Allen na ny Regenta.
Tendrombohitra Naranco sy ny Pre-Romanesque
Akaiky an'i Oviedo dia tsy azontsika atao ny tsy mahita ireo akanjo lehibe alohan'ny Romanesque manan-danja indrindra manerana ny Saikinosy. Ao amin'ny Mount Narnaco, ankoatry ny fahitana tsara ny tanàna, dia azontsika atao ny mahita ireo fiangonana telo talohan'ny Romanesque izay World Heritage Site. Miresaka izahay San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco ary San Julián de los Prados.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no jerena ao Oviedo